Tag: fivarotana fivoriambe | Martech Zone
Tag: fivarotana fivoriambe
Asabotsy, Aogositra 3, 2019 Asabotsy, Aogositra 3, 2019 Douglas Karr
Ny seho ara-barotra dia manana tombony miavaka izay mahatonga azy ireo hiverina be amin'ny fampiasam-bola ho an'ny fampisehoana marketing. Ny mpijery no tena ilaina indrindra, ny mpanatrika dia mety manana teti-bola, ary ny orinasa dia mandefa ny mpiasan'izy ireo hanao fikarohana momba ny fanapahan-kevitra momba ny fividianana. Izany dia trifecta tombony. Tsy tonga tsy misy fandaniam-bola anefa izany. Ny toerana fanofana tranoheva dia tombam-bidy ary ny miasa mba hahatonga ny fifamoivoizana mankany amin'ny trano heva misy anao dia ady… eo aminao sy ny hafa rehetra